आर्थिक हैसियत र विकासको आवश्यकता भन्दा पर गएर कर वृद्धि गरिएको छैन : प्रमुख पराजुली - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १० मंसिर २०७५, सोमबार १३:१६
विराटनगर महानगरपालिका देशको दोश्रो ठूलो सहरको रुपमा परिचित छ । ठूलो सहरको गरिमा राख्ने चुनौती महानगरका एक युवा नेतृत्वको काँधमा छ । युवा नेताले जितेको विराटनगरलाई नमूना बनाएर युवाहरुले राम्रो काम गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएका विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीसँग समग्र विराटनगरको अवस्था, यसको संभावना र चुनौति जस्ता बिषयमा गरिएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको झण्डै १८ महिनाको समय व्यतित गर्नुभएको छ, अनुभव र प्रगति कस्ता छन् ?
प्रारम्भमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाबाट कामको थालनी गर्र्यो । सुरुमा सय दिने कार्यक्रम बनाएर अस्तव्यस्त विराटनगरको खाल्डाखुल्डी पुरेर तात्कालिन राहात दिने प्रयास गर्यौं । सामाजिक विकास तर्फ निजी अस्पतालमासमेत मोतियाविन्दुको निःशुल्क उपचार गर्ने, छोरी बचाउ अभियान संचालन गर्ने र आधारभुतरुपमा गर्नै पर्ने काम हामीले अघि बढाएका छौं । RUDP / STIUEIP परियोजनालाई गति दिने काम गरेका छौं । RUDP परियोजना हाम्रै समयमा सुरु भएको हो र समयभित्रै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । STIUEIP परियोजना २१ प्रतिशत घटिमा ठेक्का लगाउन सफल भएका छौं । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि योगदान गरेको छ ।
सुशासन र पारदर्शीताको कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य भएकोले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्नपनि दिन्न भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर मैले कामहरुलाई अघि बढाएको छु । सहरी सघन विकास कार्यक्रम दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम हामीले एक वर्षमा नै करिव सम्पन्न गरेका छौं यो ठूलो उपलव्धी हो । तारणीप्रसाद सञ्चारग्राम निर्माणको कामलाई गतिदिएका छौं जुन नमुना सञ्चारग्रामको रुपमा निर्माण भइरहेको छ । यि र यस्तै थुप्रै अघि बढ्न नसकेका योजनाहरु अघि बढाउने, सरकार तथा अन्य दातृ निकायसंग समन्वय गर्ने र नयाँ स्रोतहरुको खोजि गर्ने काम राम्ररी अघि बढेको छ । विराटनगरको टर्मिनल बसपार्क सम्पन्न भएको छ तर छ लेन सडकको केही काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेकोले उद्घाटन गर्न केही ढिलाई भएको र छिट्टै सँचालनमा ल्याउँदैछौं ।
हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । यो वर्ष ४ ओटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौं । त्यसबाहेक सबै विद्यालयहरुका आधारभुत आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पुरा गर्न महानगरपालिका लागिपरेको छ । नगरभित्र दुई ओटा १५ शैंयाको अस्पताल संचालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । मैले आफ्नो एक वर्षको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा लिएको छैन त्यो रकम शिक्षा क्षेत्रमै लगानी गरेको छु । पहिलो वर्षको पारिश्रमिक र भत्ता वापथतको रकम सयपत्री प्राथमिक विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छु । दोश्रो वर्षको पारिश्रमिक गरिव, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वापत दिने सोच बनाएको छु ।
तपाईले धेरै काम गरेको बताउनुभयो तर जनस्तरमा महानगरले खास काम गर्न सकेन भन्ने सन्देश किन गइरहेको छ ?
हामीले काम गरेका छौं तर त्यसको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन भने सकेनछौं भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले काम नगरेको भए दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने सहरी सघन परियोजना एक वर्षमा सकिएर कसरी पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्थ्यौं ? त्यस्तै अन्य धेरै प्रगति भएका छन् । त्यस अनुसार प्रचारप्रसारमा भने हामी अलि पछि परेका हौं कि भन्ने लागेको छ ।
स्थानीय तह आफैंले कानून बनाएर धेरै काम गर्नेुपर्ने हुन्छ, कानून निर्माणको क्षेत्रमा कस्तो प्रगति भएको छ ?
हामीलाई चाहिने आधारभूत कानूनहरु निर्माण गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म २७ ओटा कानून निर्माण भएको छ । नियमावली र कार्यविधिहरु बनाएका छौं । पहिलो वर्ष कानून निर्माण र सिकाइको वर्ष नै भयो । पहिलो वर्ष कानुन बनाउनु पर्ने, संघीयताको नयाँ अभ्यासमा जानु पर्ने, चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरुमा बढी ध्यान दिनु परेको थियो । तथापी हामीले धेरै काम गरेका थियौं । यो वर्ष विकास निर्माणको गति तिब्र हुने छ । अवरोध आउनु पर्ने कुनै कारण नभएकोले स्वभाविक रुपले हाम्रा योजनाहरु सफलतापूर्वक अघि बढ्ने छन् र बढाउने छौं ।
स्थानीय तह बलियो र अधिकार सम्पन्न छ , त्यसप्रति जनताको अपेक्षा पनि बढी नै छ तर त्यसको सकारात्मक अनुभूति दिलाउन सफल भएजस्तो देखिदैन, त्यसको कारण के हुन सक्छ ?
संघीयता नचाहानेहरुले यतिबेला स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले काम गरेन भन्ने आलोचना बढी गरेको मेरो अनुभूति छ । सबै स्थानीय तहले राम्रो गरेको भन्ने मेरो दावी होइन तर धेरैले राम्रो गरेका छन् । राम्रो गरेको कामलाई राम्रो भन्न नसक्ने सोचले केही भएन र गरेन भन्ने अफवाह फैलाउने काम भएको छ । अर्को हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं तर केन्द्रीकृत मानसिकता भएकाहरु नियोजित विरोधमा रहेको देखिन्छ ।
धेरै स्थानीय तहहरु कर लगाउने विषयमा विवादमा परे, विराटनगर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो कर सम्वन्धि केही विषयमा पुनरावलोकन गर्यो, करको दर बढाउनु भन्दा दायरा बढाउने तर्फ काम गर्नु पर्ने हैन ?
हामीले करको दायरा नै बढाउने लक्ष लिएका छौं । कतिपय विषयमा अत्यन्त न्युन कर थियो, ५ रुपियाँ, १० र २० रुपियाँ करहरु थिए । पछिल्लो २० वर्षदेखि कर पनि बढेको थिएन । अत्यन्त न्युन कर भएका केही शिर्षकमा थोरै वृद्धि गरेका हौं । प्रतिशतमा लैजाँदामात्र धेरै बढाएजस्तो देखिएको हो तर हाम्रो आर्थिक हैसियत र विकासको आवश्यकता भन्दा पर गएर कर वृद्धि गरिएको छैन । करको दर बढाउने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा छैन, दायरा नै बढाउँछौं ।
स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ तर उपभोक्ता हित, शिक्षा, स्वास्थय, सडक सुशासन, सुरक्षा, आदि विषयमा काम गर्ने अवसर भएपनि किन काम हुन सकेको छैन ?
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौं । स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार भएपनि शिक्षाको प्रमुख बाहेक अन्य कर्मचारी समायोजन आएका छैनन् । अहिलेसम्म शिक्षाको लागि काम गर्ने पूर्ण अधिकार पनि हामीसंग आइसकेको छैन । हामीमा विश्वविद्यालय नै चलाउन सक्नेसम्मको अधिकार छ । केन्द्र सरकारले विभिन्न इकाइको नाममा शिक्षालाई चलाउने प्रयास गर्दा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दुई ओटा अस्पताल संचालन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं, निःशूल्क मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गर्ने काम हामीले गरेका छौं ।
शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले एउटा उदाहारणीय पहल अघि बढाएको छ त्यस प्रकारको कुनै काम विराटनगरले पनि गरिरहेको छ की ?
शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगेका छौं । विद्यार्थी संख्या कम भएको विद्यालयलाई मर्जरमा लैजाने, राम्रो काम नगर्ने प्रधानाध्यापकलाई सरुवा गर्ने, कारवाही गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसके त्यसलाई पनि नियमन गर्ने, निजी विद्यालयले निर्धारण गर्ने शूल्कमा महानगरको सहमति लिनुपर्ने जस्ता सुधारको काम हामीले अघि बढाएका छौं । विराटनगर भित्र रहेको सबै ५४ ओटा सरकारी विद्यालयमध्ये ३२ ओटामा अग्रेंजी माध्यमबाट अध्यापन गराउने काम सुरु भएको छ । त्यसलाई अब सबै विद्यालयमा विस्तार गरिने छ । शिक्षकहरुको उपस्थिती र उनीहरुको गतिविधिलाई नियमित अनुगमन गर्ने गरी पाँचवर्षे रणनीति बनाएर हामीले काम अघि बढाइसकेका छौं । यसले शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।
सडक र ढल निर्माणको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति भएको देखिन्छ यि काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छन् ?
एक वर्ष भित्रमा एडिबिसंगको सम्झौता अनुरुपको काम सम्पन्न गर्छौं । अबको दुई वर्ष भित्रमा हामी ७४ किलोमिटर बाटो बालेपत्रे गर्छौ र पाँच वर्ष भित्र विराटनगरका ३ सय किलोमिटर बाटोहरु कालोपत्रे गरेर धुलो र हिलोमुक्त बनाउने उद्देश्य लिएका छौं । त्यसै अनुसार काम गर्छौ ।
अहिलेपनि आधा विराटनगरमा डुवानको समस्यामा छ र सडक पूर्वाधारको अभाव छ । त्यस क्षेत्रको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले हामीले एशियाली विकास बैंकसंग छलफल गरेर तेस्रो परियोजना माग गरिरहेका छौं । ढल, खानेपानी, सडक र नाला विस्तार नगरी उहाँहरुले सुरु गर्नुभएको काम सम्पन्न हुन सक्दैन भनेर हामीले भनेका छौं । त्यसमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि विराटनगरले पहिलो र दोश्रो परियोजना जसरी अघि बढायो त्यसप्रति सन्तुष्ट भएकोले थप परियोजना आउनेमा म आशावादी छु । त्यसैगरी जाइकासंग खानेपानीको योजनामा छलफल गरिरहेका छौं र केही दिन भित्रै यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर खानेपानीको एकीकृत योजना अघि बढाउने पक्षमा छौं । त्यति गर्दापनि केही अभावहरु अवश्य बाँकी रहने छन् । त्यसलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग समन्वय गरेर पुरा गर्ने तर्फ मेरो निरन्तर पहल हुने छ ।
भ्यु टावर निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सार्नुभयो, त्यसको डिपिआर तयार छैन र आर्थिक स्रोतको पनि सुनिश्चितता गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा यो योजना कसरी अघि बढ्छ ?
यो कमर्सियल भ्यु टावर हो । यसले ८ देखि १० वर्ष भित्रमा लगानी फिर्ता गर्न सक्छ । यो सहकारीको मोडलबाट अघि बढाउनु पर्छ । महानगरपालिकाको बजेटबाट मात्र यो निर्माण सम्भव छैन । भोली विराटनगरलाई माया गर्ने विदेशमा बस्ने नेपालीहरु, विदेशी दातृ निकायहरु, उद्योगी व्यवसायिबाट लगानी जुटाउने र पब्लिक शेयर आव्हान गरेर पनि यो परियोजना अघि बढ्छ । यो विराटनगरको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यो परियोजनाप्रति नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । यो हाम्रो सपना हो र सपना पुरा गर्न हामी सबै लागि पर्नु पर्छ ।
विराटनगर अस्थायी राजधानी हो र यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नकालागि महानगर प्रमुखको तर्फबाट कस्तो भूमिका खेलिरहनुभएको छ ?
अस्थायी लाई स्थायि राजधानी बनाउने कुरामा मैले आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको छु । महानगरको तर्फबाट सडक, ढल, नाला, तथा आवश्यक पर्ने जग्गा जमिनको प्रवन्ध मिलाउने काममा म लागिपरेको छु । विराटनगर १९ मा प्रसस्त खाली जमिन रहेको छ र ल्याण्डपुलिङ गरेर प्रदेश सरकारकालागि आवश्यक पर्ने जमिन उपलव्ध गराउने तयारीमा हामी लागि परेका छौं । त्यस बाहेक विराटनगर १९ मा ३ हजार मानिस अटाउने आधुनिक सभाहल निर्माण गर्ने कामको अध्ययन अघि बढाएका छौं भने निजी क्षेत्रसंग मिलेर विराट राजाको प्राचिन दरवारको स्वरुपमै निर्माण गर्न एउटा अध्ययन समिति गठन गरेर काम सुरु गरेको छु । यसले विराटनगर राजधानीयोग्य शहर हो भन्ने आधार तयार पार्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
अन्त्यमा, तपाई युवा हुनुहुन्छ, युवालाई विकासमा कसरी जोडिरहनुभएको छ वा छैन ? अनि जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ ?
म सुशासन र पारदर्शितालाई देखिने गरी कार्यान्वयन गर्दै शासकीय सुधारमा केन्द्रीत भएको छु । सुशासनको जगबाट म युवाहरुलाई विकासमा जोड्ने छु । म जानेर कुनै गल्ती गर्दिन र भुलवस भएको गल्तीलाई म सच्याउने छु । भ्रष्टाचार विरोधी जगबाट म अघि बढिरहेको हुँदा त्यो नैतिक जगले मलाई सफलता दिलाउने विश्वास लिएको छु । यहि सन्देश लिएर म अहिले विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुसंग अन्तरक्रिया गरिरहेको छु । युवाहरुले कस्तो विकास चाही रहेका छन् भनेर उहाँहरुको मनोभावना बुझिरहेको छु । महानगरपालिकाले जनतासँग मेयर भन्ने कार्यक्रम लिएर जनप्रतिनिधिसहित वार्डवार्डमा गएर अन्तरक्रियाको तयारी गरेको छ । त्यसले जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने र उहाँहरुको अपेक्षा बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
मोरङको उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधि विवाद झन् चर्कियो
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे औपचारिक रुपमा छलफल सुरु
कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलाप्रति विराटनगरका अधिकारकर्मीहरूको असहमति
चितवन, २६ मंसिर । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित...